International Girlfriend's Day အတွက် ပန်းစည်းပေးခံလိုက်ရတဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်း
International Girlfriend’s Day အတွက် ပန်းစည်းပေးခံလိုက်ရတဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်း
31 Jul 2018 . 10:49 AM
အရိပ်နဲ့ ပဉ္စလက်ရွာဇာတ်ကားတွဲတွေနဲ့ အောင်မြင်လူသိများလာခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းစန္ဒာလှထွန်း ဆိုတဲ့ နန်းနန်းလေးကတော့ နှင်းဆီပန်းစည်းအကြီးကြီး ပေးခံလိုက်ရပြန်ပါပြီ။ ဒီအကြောင်းကိုလည်း သူက ပျော်ပျော်မြူးမြူးလေးနဲ့
“Red big boutique make my heart melt
ရည်းစာသာထားဖူးတာ တစ်ခါမှ ပန်းစည်း အကြီးကြီး မရဖူးဘူး ချစ်မက #International Girlfriend Day ( 1. 8. 2018 ) အတွက် တဲ့ နန်းနန်းတို့ပျော်ပြီလေ တစ်ကယ်ပြောရရင် Chit Thway Ni သူ Facebook ပေါ်မှာ တင်တင်နေတာတွေ တွေ့ကတည်းက ကြိတ်ကြိတ်ပြီးလိုချင်နေမိတာ … ဟီး .. အခုနေမကောင်းတောင် ပျောက်သွားပြီ … မှာချင်ရင် အဲ့မမဆီကမှာလို့ရတယ်နော် … ကောင်မလေးချင်းချင်းလည်းဂမနက်ဖြန်ဆိုပေးလို့ရတယ်လို့
Thanksoso _ floral by lbr
I love it so much ” ဆိုပြီး တင်ထားခဲ့ပါတယ်။
နန်းနန်းနဲ့ သူရတဲ့ ပန်းစည်းကြီး
International Girlfriend’s Day မှာ မိန်းကလေးချင်းတောင် ပန်းစည်းပေးခံရတဲ့ နန်းနန်းကိုတော့ feeling အားကျပါပဲ။
Photo Credit : Nan Sandar Hla Htun’s Facebook Account
International Girlfriend’s Day အတှကျ ပနျးစညျးပေးခံလိုကျရတဲ့ နနျးစန်ဒာလှထှနျး
အရိပျနဲ့ ပဉ်စလကျရှာဇာတျကားတှဲတှနေဲ့ အောငျမွငျလူသိမြားလာခဲ့တဲ့ မငျးသမီးခြောလေး နနျးစန်ဒာလှထှနျး ဆိုတဲ့ နနျးနနျးလေးကတော့ နှငျးဆီပနျးစညျးအကွီးကွီး ပေးခံလိုကျရပွနျပါပွီ။ ဒီအကွောငျးကိုလညျး သူက ပြျောပြျောမွူးမွူးလေးနဲ့
ရညျးစာသာထားဖူးတာ တဈခါမှ ပနျးစညျး အကွီးကွီး မရဖူးဘူး ခဈြမက #International Girlfriend Day ( 1. 8. 2018 ) အတှကျ တဲ့ နနျးနနျးတို့ပြျောပွီလေ တဈကယျပွောရရငျ Chit Thway Ni သူ Facebook ပျေါမှာ တငျတငျနတောတှေ တှကေ့တညျးက ကွိတျကွိတျပွီးလိုခငျြနမေိတာ … ဟီး .. အခုနမေကောငျးတောငျ ပြောကျသှားပွီ … မှာခငျြရငျ အဲ့မမဆီကမှာလို့ရတယျနျော … ကောငျမလေးခငျြးခငျြးလညျးဂမနကျဖွနျဆိုပေးလို့ရတယျလို့
I love it so much ” ဆိုပွီး တငျထားခဲ့ပါတယျ။
နနျးနနျးနဲ့ သူရတဲ့ ပနျးစညျးကွီး
International Girlfriend’s Day မှာ မိနျးကလေးခငျြးတောငျ ပနျးစညျးပေးခံရတဲ့ နနျးနနျးကိုတော့ feeling အားကပြါပဲ။